Shacabka Soomaliyeed ayaa u arka in qaraxii ay Shabaabku la beegsadeen hotel ay deganaayeen wafdi horudhac ah oo ka socda dalka Turkiga uu ahaa mid lagu hungoobay oo aan marnaba hakin doonin horumarka dalka.
Argagixisadii weerarka geysatay ayaa iridka hoteelka gudbi waayay oo isla meeshaas ayaa lagu toogtay. Sidoo kale, kuwii soo abaabulay weerarka uma suuroobin in ay cabsi geliyaan saaxibada Soomaliya, waayo socdaalkii Madaxweynaha Turkiga Rajab Dayib Erdogan sidii loogu talo galay ayuu ku dhacay, waxuuna furay dhawr mashaariic oo dardargelinaya horumarka dalka, sida madaarka cusub ee Aadan Cadde, isbitaalka casriga ah ee Digfeer iyo kuwo kale oo daliil u ah in Soomaaliya ay tubta nabadda iyo horumarka cagta saartay.
Kooxaha nabad-diidka ah gabalkoodu wuu dhacay, madaxda iyo shacabka Soomaaliyeedna waxay haatan u soo jeesteen sidii ay dalkooda dhibaatada uga saari lahaayeen. Taas ayaa in badan oo dalalka dunida ka tirsan ku dhiiragelisay in ay dalkeenna la macaamilaan, maalna gashadaan. Horraantii bishan Soomaaliya waxay martigelisay shirkii 53aad ee wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka IGAD, iyadoo lagu wado in shirweynaha madaxweynayaasha isla dalalkaas lagu qabto Muqdisho sanadkan gudihiisa, taasoo muujineysa kalsooni nabadeed.
Dowladda Soomaaliya oo madaxda al-Shabaab ugu baaqday in ay is dhiibaan
Dowladda Soomaaliya ayaa mar kale sheegtay in ay cafis u fidineyso madaxda al-Shabaab ee ka soo waantooba dhibaatada ay shacabka ku hayaan, kii diidana la dili doono maadaama aysan jirin meel ay ku dhuuntaan.
Waxaa dhawaan baaqa dowladda ka jawaabay oo isi soo dhiibay Xassan Dhuubi oo ah horjooge sare oo ka tirsan al-Shabaab, kaas oo isu dhiibay maamulka degmada Luuq ee gobolka Gedo. Dhawr isbuuc ka horna waxaa isi soo dhiibay madaxii hore ee amniyaatka al-Shabaab, Zakariye Ismaaciil Xirsi oo isagu isku dhiibay ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Ceelwaaq oo ku taala xadka Soomaaliya iyo Kenya.
Kuwa ka dhega-adeygay baaqa dowladda ayaa cawaaqib xumo la kulmay. Kuwaas waxaa ka mid ahaa Ibraahim Fiiley oo dhowaan isaga iyo saddex nin oo ilaanineysay lagu dilay tuulada Kunturwaarey. Waxaa sidoo kale taariikhdu markay aheyd 29ka Diseembar ee sanadkii tagay weerar dhanka cirka ah lagu dilay taliyaya amniyaadka al-Shabaab isagoo ku dhuumaaleysanaya meel u dhow degaanka Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe.
In badan oo ka tirsan madaxda al-Shabaab ayaa qorsheysanaya in ay dowladda isku soo dhiibaan si ay uga badbaadaan dilalka lagu bartilmaamadeysanayo.
Maamulka Koonfur-galbeed oo ugaarsanaya argagixisada al-Shabaab
Ciidamada dowlad-goboleedka Koonfur-galbeed ayaa bilaabay hawlgal ay ku ugaarsanayaan qaar ka mid ah argagixisada al-Shabaab ee ku dhuumaaleysanaya magaalada Baydhabo.
Ciidamada maamulka ayaa sheegay in qorshahoodu yahay in ay magaalada Baydhabo iyo nawaaxigeeda ay ka sifeeyaan dambiileyaashan xilli ay ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ay ku sii fidayaan dhulalka baadiyaha ah ee gobollada Baay, Bakool iyo Shabeellah Hoose iyagoo baacsanaya haraadiga al-Shabaab. Ciidamada ayaa ugu baaqay shacabka in ay soo sheegaan meelaha ay argagixisadu ku dhuumaaleysaneyso si magaalooyinka iyo baadiyahaba looga sifeeyo nabad-diidka.
Hawlgalka lagu bartilmaamadeysanayo al-Shabaabk ayaa yimid kadib markii Shariif Siidkey oo ah Sheekh caan ah oo ka tirsan ururka Ahlu Sunnah masaajid hortiisa ay argagixisadu ku toogteen. Dilka Sheekha ayaa aad uga careysiiyay shacabka, iyagoo ku baaqay in maamulku uu tilaabo adag ka qaado argagixisada dhiigyacabka ah ee caadeystay dhibaateynta dadka aan waxba galabsan. Shacabka ayaa ku baaqay in dowladdu ay sii labajibaarto hawlgallada argagixisada dalka looga sifeynayo.
Oday-dhaqameedyada oo diiday awaamiirta gurracan ee al-Shabaab
Oday-dhaqameedyada gobollada Galgaduud iyo Mudug ayaa wax-kama-jiraan ka soo qaaday hanjabaadda uu ururka al-Shabaab ee ku aaddanaa ka qeybgalka shirweyne lagu aasaasayo dowlad-goboleedka Bartamaha Soomaaliya, kaas oo ku biiri doona dowlad-goboleedyada hadda jira ee Puntland, Jubbaland iyo Koonfur-galbeed.
Argagixisada al-Shabaab ayaa waxaa lagu soo warramayaa in oday-dhaqameedyo kor u dhaafaya 150 ay ku shiriyeen degaanka Xarardheere oo wali gacantooda ku jira, halkaas oo ay odayaasha ugu hanjabeen in ciddii ka qeybgasha shirweynaha lagu aasaasayo dowlad-goboleedka Bartamaha dalka ay dili doonaan. Balse odayaasha ayaa diiday in ay u hoggaansamaan awaamiirta gurracan ee ururka al-Shabaab, iyagoo odayaashu ay sheegeen in aysan marnaba ka baaqsan doonin doorka ay bulshada ku leeyihiin, kaas oo ah in ay nabadda ka shaqeeyaan, dadkana ay u horseedaan dib-u-heshiisiin iyo maamullo loo dhan yahay.
Odayaasha ayaa sheegay in ay dadkooda matalaan, sidaa daraadeed ay waajib tahay in ay ka qeybgalaan shirarka nabadda iyo maamul-wanaagga looga hadlayo. Qaar ka mid ah odayaasha oo si gooni ah saxaafadda ula hadlay ayaa sheegay in argagixisadu ay rabaan in ay dadka ka hor istaagaan xuquuqdooda si dalku uusan u yeelan hoggaan ka shaqeeya danta umadda. Dhiiranaanta ay odayaashu ku dhiiradeen in ay diidaan awaamiirta al-Shabaab waxay daliil u tahay sida ay awoodda argagixisadu u wiiqantay.